ကေပေါ့ပ်လောကထဲက ဘီတီအက်စ် - DVB
Lead Story ဆောင်းပါး အနုပညာ
ကေပေါ့ပ် (K-pop) လောကဆိုတာ သံစဉ်မြူးမြူးလေးတွေကြားမှာ စည်းချက်ညီတဲ့ ကကွက်အဆန်းတွေနဲ့အတူ နှစ်လိုဖွယ်ဟန် အက၊ အလှလေးတွေကြောင့် ချာတိတ်လေးတွေသာ ကြိုက်တယ်လို့၊ ဒီလောက်ထိသာ အရင်က တွေးထင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ခုချိန်မှာတော့ ကေပေါ့ပ်လောကဟာ အဲဒီလို ထင်မြင်ချက်တွေထက် ပိုနေပါပြီ။ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာစကား ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ မလိုတဲ့ ဂီတအနုပညာကမ္ဘာ့ကြီးထဲမှာ ကေပေါ့ပ်ဟာ နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်တွေကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဖြတ်သန်းသွားပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှာ၊ Billboard မှာ၊ နိုင်ငံတကာသတင်းကြီးတွေမှာပါ နေရာယူနေပါပြီ။
Soft Power နဲ့ K-pop
Soft Power ကို တိုင်းတာတဲ့ စံနှုန်းတွေထဲမှာ ယဉ်ကျေးမှုက တစိတ်တပိုင်းနေရာက ပါဝင်နေပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Soft Power 30 အစီရင်ခံစာဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာထဲက Soft Power အားဖြင့် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံ ၃၀ ကို ရွေးချယ် ထုတ်နုတ်ထားတာပါ။ ဒီစာရင်းထဲမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ အရှေ့ပိုင်းအာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံများနဲ့ ယှဉ်ပြီး ၁၀ နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာ ဒုတိယနေရာက ရပ်တည်နေတာပါ။
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလို့ ဆိုလိုက်ရင်လည်း ကေပေါ့ပ်ဟာ နေရာတခုကနေ ရှိနေမှာပါ။ ကေပေါ့ပ်ဟာ တောင်ကိုးရီးယားကို Soft Power 30 မှာ စာရင်းချိတ်ပေးနိုင်အောင် စွမ်းနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကေပေါ့ပ်လောကလို့ ဆိုပြန်ရင်လည်း ကေပေါ့ပ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေစိတ်ထဲမှာ ကေပေါ့ပ်စတား (K-pop Stars) တွေ များစွာ ရှိနေတဲ့အထဲက ဘီတီအက်စ် (BTS) ကိုပါ ပြေးမြင်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘီတီအက်စ်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ နိုင်ငံတကာ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိဆုံး လူ ၁၀၀ ထဲမှာ စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး၊ အနောက်ဘက် အနုပညာလောကထဲကိုပါ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေပါပြီ။
တောင်ကိုးရီယားနိုင်ငံဟာ အခုလို Soft Power မှာ အင်အားကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမယ့် အနေအထားမှာ ရပ်တည်နေသော်လည်း တခြားတဘက်မှာတော့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ကျော်ကြားသူတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူတို့အသက်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ။ ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘီတီအက်စ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
“LOVE Yourself” ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ သတင်းစကားတွေ
ဘီတီအက်စ်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF)နဲ့ ပူပေါင်းပြီး #ENDviolence ဆိုတဲ့ ကမ်ပိန်းတခု လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ပုံငွေ ရှာလိုက်တာ ဒေါ်လာ ၁ သန်းလောက်အထိ ရပါတယ်။ ကမ်ပိန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ကမ္ဘာတဝန်းက ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ “စစ်မှန်တဲ့အချစ်ဆိုတာ မိမိကိုယ် မိမိချစ်ခြင်းက အစပြုတယ်” “true love first begins with loving myself” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ ကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး၊ နောက် #LoveMyself #SpeakYourself ဆိုတဲ့ သတင်းစကားတွေပါ ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့လူမှု အသိုက်အဝန်းအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု လမ်းစအဖြစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကို ထင်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နယ်စည်းမခြားဘဲ လူငယ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတဲ့ ဘီတီအက်စ်ဟာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အပိုင်းမှာတော့ ကမ္ဘာ့အနုပညာစီမံကိန်းကြီးတခု စတင်နေပါပြီ။ “Connect,BTS” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အနုပညာစီမံကိန်းဟာ London(UK), Berlin(Germany), Buenos Aires(Argentina), Seoul (South Korea) and New York ( US) မှာရှိတဲ့ အနုပညာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စီမံကိန်းကြီးဟာ အနာဂတ်မှာ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမူ၊ အနုပညာတံတားကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သီချင်းစာသားတွေ ဘီတီအက်စ်ရဲ့ သီချင်းစာသားတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ ဧပြီ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ Map of the Soul: Persona ဆိုတဲ့ သီချင်းတပုဒ် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ Album Title လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းရဲ့စာသားတွေဟာ ဒေါက်တာမာရေးစတိန်း ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ Jung’s Map of the Soul ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ဒီစာအုပ်ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ လူတွေမှာ ၊ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ရေးသားထားပါတယ်။ စာအုပ်ပြုစုသူ ဒေါက်တာစတိန်းဟာ စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ၊ စာရေးဆရာ၊ နောက် တက္ကသိုလ်မှာ စာသင်ပြညွှန်ကြားသူ (Lecturer) တယောက်ပါ။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ မူလဇာစ်မြစ်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ စိတ်ခွဲခြမ်းစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပါရဂူ ကားလ်ဂျန်ရဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သီအိုရီတွေကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတာပါ။
ဘာသာပေါင်းများစွာ ပြန်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ခုဆိုရင်တော့ Jung’s Map of the Soul စာအုပ်အညွှန်း ရေးသားသူတွေက ဘီတီအက်စ်အကြောင်းပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြ ရပါတော့တယ်။
“Map Of The Soul, Presona” ရဲ့သီချင်းစာသားတွေက “Who am I? is the question I’ve had all my life. And I’ll probably never find the answer” “ငါက ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းက ငါ့ဘဝတလျှောက်လုံး မေးနေတဲ့ မေးခွန်းတခုပဲ၊ ငါ ဒီအဖြေကို ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စာသားတွေပါတယ်။ လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေ၊ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းတွေစတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အခြေခံပြီး Raps ပုံစံ သီကုံးရေးဖွဲ့ထားတာပါ။
ဒေါက်တာစတိန်းက သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှုတွေ များနေတဲ့ အခုလိုချိန်မှာ သူတို့အဖွဲ့က လူငယ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို သီချင်းစာသားတွေကနေတဆင့် ဖော်ပြသွားတာ ကောင်းပါတယ်” လို့ ဘီဘီစီမှာ ဧပြီ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ချီးကျူးမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
အနုအရွ အလှအပလေးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်
တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံဟာ ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်မှုနှုန်းက နိုင်ငံတကာမှာ စံချိန်တင်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတခုပါ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာလတွေမှာ တလကို တယောက်နီးပါးနဲ့ သုံးယောက်ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဆုံးပါးသွားတဲ့ သတင်းတွေ ကြားရပါတော့တယ်။ ဆုံးပါးသွားတဲ့သူတွေဟာ အနုပညာနယ်ပယ်က ကျော်ကြားတဲ့၊ အသက် အလတ်ပိုင်းထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းတွေဟာ ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တွေနဲ့၊ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများကိုပါ လှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။ သူတို့ ဆုံးပါးသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အတိအကျ မသိရသော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်မှုနဲ့ သံသယမကင်းတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေသာ လူတွေကြားတွေမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
မြူးမြူးကြွကြွ အကအလှနဲ့ အရောင်အသွေးစုံလှတဲ့ ရိုက်ကွက်အဆန်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ကျမတို့ မမြင်နိုင်တဲ့ အခြားတဘက်မှာ ဝေဖန်ရှုတ်ချပြောဆိုမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အတူ ကျမတို့တွေ နားမလည်နိုင်သေးတဲ့ လူမှုရေးပြဿနာပေါင်းများစွာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဘီတီအက်စ်ဟာ တောင်ကိုရီယားကို ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားက လူများများသိအောင်၊ အလည်လာချင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ကေပေါ့ပ်လောကဟာ ဆိုရင်လည်း အနောက်ပိုင်းအနုပညာရှင်တွေက နေရာပေးနေရတဲ့၊ နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးနေရတဲ့ အကြောင်းအရာတခု ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။
ဓာတ်ပုံ- Nhu Xuan Hua for TIME / love-myself.org / Getty Image/ murraystein/ BTS
Murray Stein Official Site- http://www.murraystein.com/books.shtml
BTS Official site- https://ibighit.com/bts/eng/
The Soft Power 30- https://softpower30.com/
Connect BTS- https://www.connect-bts.com/
Tags: ကေပေါ့ပ်လောကထဲက ဘီတီအက်စ်
Previous story ငါးဖမ်းသင်္ဘောပေါ်မှ လေဖြတ်ဝေဒနာရှင်ကို အာဂျင်တီးနားရေတပ် ကူညီ
Next story အီရန် ထိန်းသိမ်းထားသည့် သုတေသပညာရှင် ၂ ဦး ပြန်လွှတ်ပေးရန် ပြင်သစ် တိုက်တွန်း
01	ကိုဗစ်အရေးပေါ်လူနာများအတွက် သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းကြရန် အဆိုတော်မျိုးကြီး နှိုးဆော် (ရုပ်သံ)
02	ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ဂိတ်အားလုံး ထောက်ခံစာပြပြီး သွားနိုင်ဟု တာဝန်ရှိသူပြော
03	ပြီးခဲ့သည့်ရာသီထက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုပြင်းထန်မည်ဟု ကလော့ပ်သုံးသပ်
04	“ကစားသမားတွေဟာ စက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး” ဂွါဒီယို
05	အေမီကော်နေးဘားရတ်ကို တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအဖြစ် ထရမ့် တင်သွင်း